तिर्खा : भगवती कँडेलको फेसबुकबाट
भगवती कँडेलको फेसबुकबाट
मलाई मनपर्ने गज़लकार मध्ये एक हुन् - भगवती कँडेल । उनका गजलहरु थोरै छन तर मीठा हुन्छन्, उत्कृष्ट हुन्छन । साहित्यमा रुची राख्ने यी धादिङकी बहिनी लामो समय इजरायलमै थिइन, तर एउटै देशमा कर्मथलो भएर पनि उनीसँग प्रत्येक्ष भेटघाट र भलाकुसारी गर्ने अवसर खासै जुरेन । नेपाल जाने बेला यही पुस्तक दिने वहानामा एकपटक भेट भयो, चार बर्षअघि रामत गानको लुमी पार्कमा भएको साहित्यिक पिकनिकमा भेट भएको थियो । यद्यपी फेसबुक र इन्टरनेटले त्यो टाढाको आभास भएको थिएन र नहोस । तिर्खा पढेपछिको उहाँको यो सुन्दर प्रतिक्रिया हो । मुरी मुरी धन्यवाद बहिनी भगवती कँडेललाई यी मिठा शव्दहरुका लागि ..
“खबिबी खबिबी या नूर एल आइन, या सकिन खयाली”
भन्दै कथाकार कहिले आफ्नी अरबी प्रेमिका ‘नूर’ को बयान गर्न पुग्छन् त कहिले प्रेम के हो ? कस्तो हुन्छ प्रेमको रङ ? आदि-इत्यादी प्रश्नहरुमा प्रेमको परिभाषा खोजिरहेका हुन्छन्। पाठक र लेखक बिचको प्रेम कस्तो हुनुपर्छ र यौटा असल पाठकले लेखकको जिवनमा कस्तो भूमिका खेलेको हुन्छ भनेर पनी (अपरिभाषित प्रेम भित्र ) छताछुल्ल भएर पोखिएको छ ।
‘म शरीरलाई प्रेम गर्छु, मलाई आत्माको बन्धनमा कुनै विश्वास छैन’ शिर्ष कथाकी पात्र प्रेमाको तिर्खा ले झन यो परिवर्तनशील समयको सम्बोधन गरेको छ । रियादको बन्दिगृहमा मृत्युदण्ड पाईसकेको यौटा कैदीको कथाले असङ्ख्य परदेशीका मृत्युको कथा बोकेको छ ।
(छातीभित्र कहाँ हुन्छ कस्ले देख्न सक्छ माया
परम्परा जात धर्म केले छेक्न सक्छ माया)
भन्दै इस्लाम परिवारकी ‘इसरत’ लाई पर्खिरहन्छन कथाकार ! पाठक कैले मनोरम वस्तीभित्र हराउँछ त कैले खोज्न थाल्छ अनुत्ततित प्रश्नका जवाफहरु ! म यतिबेला सम्झिरहेकी छु बब्लु र मुनाको प्रेम !
अरब इजरायल बिचको युद्दका कथा त यो पाठकले पनी बिगत छ बर्ष देखी भोगिरहेको छ । जब “शेरिफ” जस्तो प्यालेस्टानी केटाको कथा पढिन्छ नी लेखकले मात्र हैन प्रत्यक पाठकले पराजय र मृत्युको कथा नलेख्न आग्रह गर्नेहरुसंग सहमती जनाउँदैनन्।
दिदी र भाई बिचको प्रेमले प्रत्यक पाठकलाई बालपनमा फर्काउँछ ।
यि र यस्ता धेरै कथाहरु छन “तिर्खा” भित्र म पढ्दै छु । तमाम परदेशी साथिहरुले त झन छुटाउनै नहुने पुस्तक हो यो । सकेसम्म सबैले पढौँ यो पुस्तक ।
वास्तबमा तिर्खा पढ्नु पर्ने पुस्तक रहेछ - अर्जुन पौडेल
पढ्न रुचाउने पाठकका लागि समीक्षा र पुस्तक अध्ययन गर्दै गरेका सेल्फीहरु सबै भन्दा सुन्दर विज्ञापन सरह हुदारहेछ्न । फेसबुक मित्र अर्जुन पौडेल...
अनु थापा प्रोफाइल फोटो
फेसबुकमा सेल्फीको रुपमा राखिएको पहिलो सेल्फी । क्याप्सनमा लेख्नु भएको थियो - साँचै नै मार्मिक शव्दहरुले भरिएको "तिर्खा" जति...
प्रेम के हो ? कस्तो हुन्छ प्रेमको रङग ? म भित्र जुलुस बनेर उभिन्छन् प्रश्नहरू । भ्यालेन्टिनाको आँखाको सागरमा छाल जसरी उर्लिएको जे देखिरहेको ...
तिर्खाका पहिला पाठकहरु वसन्ती श्रेष्ठ, सावित्री घिमिरे र सुनिता बस्नेत
इजरायलको तेल अभिभ, नारीहरुको महान उत्सव तीजको रमझम अनि 'तिर्खा' कथा संग्रह ... हो तीजको यही मनोहर मौसममा नै 'तिर्खा' कथा सं...